Qaxootiga Ciraaq Iyo Carl Bildt - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxootiga Ciraaq Iyo Carl Bildt
Publicerat fredag 21 januari 2011 kl 12.36
Wasiirka arrimmaha dibadda Carl Bildt iyo wasiirka wasaaradda socdaalka Tobias Billström ayaa dhaleeceeyn loo soo jeediyay, sida ku caddeeyd maqaal lagu soo qoray wargeeyska maalinlaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Svd. Dhaleeceeyntaasina oo la xiriirta mar ey wasiirradu la kulmeen safiirka dawaladda Mareeykanka u fadhiya dalka Ciraaq Ryan Crocker, war laga soo xigtay dokumen uu soo daabacay bogga internetka ee Wikileaks.
Kulankaa ayuu Carl Bildt kala xaajooday dan-jiraha arrimmo ey ka mid yihiin shuruudaha adag ee dalkani ku qaabilo qaxootiga ciraaqiyiinta ee aannu dalku dooneeyn in deggenaansho la siiyo.
Bild ayaa cadeeyay rabitaankiisa in dawladdiisu heshiis la gaarto maamulka Ciraaq sidii dib loogu celin lahaa muwaadiniinta ciraaq dalkoodii hooyo, haddii aanay middaasi suurta-gelinna ay adkaaneeyso sidii dalkani uga furan lahaa safaarad dalka Ciraaq.
Warkaa ayey ka dhiidhiyeen siyaasiyiin ay ka mid tahay wakiilka dalkan u matala ururka Midowga Yurub Cecilia Malmström kana tirsan xisbiga shacabka. Halka ay Bodil Ceballos, af-hayeenka arrimmaha dibadda ee xisbiga Dooggu sheegtay inay dacwad ka dhan ah wasiirrada arrimmaha dibadda iyo socdaalka u gudbin doonto guddi-hoosaadka arrimmaha shuruucda ee baarlamanka, sida ku cad war laga soo xigtay idaacadda la iska daawado ee Tv4.
- Dawladdayadu waxay marar badan ka hadashaa ilaalinta xuquuqda bani'aadamka, midda iminkana waa mid xaqiiqdii meel kaga dhaceeysa xuquuqda bani'aadamka, sida ay sheegtay Bodil Cebalos.
Wasiirrada ayaa dhaleeceeyntooda ku saleeyay sida ku qoran qoraalka Wikileaks dhaqanka la xiriira dilalka sharaf-dhaca hedersmord waxa afkan lagu yiraahdo, sidaa daraadeedna loo baahan yahay in la dhimo tirada magan-gelyo-doonka lagu siiyo dalka ee dadyoowga asal ahaan ka soo jeeda Ciraaq.
- Waa fal laga naxo, wayna igu adag tahay inaan rumeeysto in wasiirrada Carl Bildt iyo Tobias Billström afkooda laga maqlo ereyo noocaasiya, sida ay sheegtay Cecilia Malmström. Iyadoona dooddaha noocaniya ku tilmaantay wax la karahado.
Isha: TT, TV4, SvD